Umnxeba onamandla wokuZimelela kuwo onke amanqanaba kwi-UNDP, kwiSitayile saseJamaica
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » News Sustainability » Umnxeba onamandla wokuZimelela kuwo onke amanqanaba kwi-UNDP, kwiSitayile saseJamaica
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • abantu • Xanduva • News Sustainability • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica namhlanje unike intetho yokuvula kwiSiseko seNkqubo yoPhuhliso yeZizwe eziManyeneyo (UNDP).
Amalungu yiArgentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Trinidad naseTobago, eUruguay, eVenezuela.
AmaNtetho okuvula ngoHloniphekileyo u-Edmund Bartlett, uMphathiswa wezoKhenketho, kwiSemina yeSiseko se-UNDP/EU-LAC malunga nokuZinziswa kwezeMali kunye noZinzo kooSomashishini boKhenketho.
Ukwakha ukomelela kuwo onke amanqanaba kubalulekile ekuqhubeleni phambili i-Ajenda yowama-2030 yoPhuhliso oluZinzileyo.
Ikwalawula ngokufanelekileyo izibophelelo zethu zamazwe ngamazwe zokukhula okuzinzileyo nokuzinzileyo kunye nophuhliso kuzo zonke iintsika zalo-ezoqoqosho, ezentlalo kunye nokusingqongileyo.
Umphathiswa wezoKhenketho eJamaica u-Edmund Bartlett uthe:
Kuluphawu oluwonga kwiJamaica ukusebenzisana namaqabane ethu kwi-EU-LAC Foundation kunye ne-UNDP kule seshoni yesithathu kumjikelo wemisitho emihlanu efuna ukukhuthaza iingxoxo zengingqi kunye nabachaphazelekayo abaninzi ukulungiselela ukhenketho oluzinzileyo. Kumxholo wendyikityha ye-COVID-19, iingxoxo ngozinzo ngokuyimfuneko zibandakanya ukugxila ekomeleleni-abantu abomeleleyo, uluntu olomeleleyo, amacandelo omelela kunye noqoqosho oluzinzileyo.
Ndimele ndongeze ukuba ukomelela kunye nokuzinza kube zizinto eziphambili kwi-ajenda ephambili kuRhulumente waseJamaica. Ngeso sizathu, i-Global Tourism Resilience and Crisis Management Centre (GTRCMC) yasekwa phambi kobhubhane, ngokuqaphela imfuneko yendawo efanelekileyo yokuqwalasela kunye nokujongana nokuphazamiseka okunokuphazamisa indlela yethu yophuhliso. Ndiqaphela ukuba uNjingalwazi Lloyd Waller, uMlawuli oyiSigqeba we-GTRCMC, ubalwa phakathi kwamaqela ephaneli yanamhlanje, kwaye ndiqinisekile ukuba intetho yakhe iya kwabelana ngokuqonda ngakumbi ngomsebenzi welo qumrhu.
Ugqaliselo lwanamhlanje ekomeleleni kwezemali kunye nozinzo koosomashishini, kwaye ndingafuna ukugxininisa kumashishini okhenketho amancinci, amancinci naphakathi (MSMTEs), yinto ebalulekileyo kwingxoxo ebanzi yokuqinisa iinkqubo zethu, iinkqubo kunye nabantu bokubuyisela kunye nokukhula. Ngokukodwa, kuba i-MSMTEs zisisiseko kwicandelo lezokhenketho kwaye, njengoko sithanda ukutsho ukuba ziyintsika yoqoqosho lwaseJamaican olubandakanya iinkampani ezingaphezu kwe-425,000 kwaye zimele i-90% yecandelo labucala.
Kwangoko ubhubhane, uRhulumente waseJamaican waqaphela isidingo sokwenza kunye nokuxhasa eli candelo lisemngciphekweni ukuze lisinde kwaye, ukongezelela, ukusinda kwecandelo kunye noqoqosho. Oku kuquka ukurhoxisa imirhumo yelayisenisi ukuya kwi-J$47 yezigidi ukusuka ku-Epreli ka-2020 ukuya kuMatshi ka-2022 kunye nokwakha ulwakhiwo lwenkxaso elomeleleyo lokuxhobisa ngokutsha kunye nokuchacha kwiziphumo zoqoqosho ze-COVID-19. Ubonelelo lweepakethe zokukwazi ukumelana nemeko, ukuququzelelwa kwemali-mboleko kunye nezibonelelo ezivela kwiSebe lezeMali kunye neNkonzo kaRhulumente yayizezinye zezinto eziphambili ekuxhaseni ii-MSMTEs. Ukongeza, uRhulumente waseJamaica ngokusebenzisa intsebenziswano karhulumente-yabucala uphuhlise i-E-commerce National Delivery Solutions (ENDS), i-app eyenza ukuba kuqhubeke ishishini ngexesha le-COVID 19 yeeyure.
Ii-MSMEs zinyanzelwa zizithintelo zokufikelela kwiimarike kunye nofikelelo olulinganiselweyo kubuchwephesha obutsha. Ngaphaya koko, basoloko bengaxhobelanga ukuphendula ngokufanelekileyo kuphazamiso ngenxa yokunqongophala kwemali yokuhlawula amatyala, ukufikelela okunqongopheleyo kwezemali nezikali eziphembelele impendulo karhulumente kwinkxaso yoshishino. Ngaphandle kwale mingeni, kukho amathuba abalulekileyo koosomashishini malunga ne-e-commerce, ukwenziwa ngokusesikweni kwemisebenzi yabo kunye nophuhliso lwezicwangciso zokuqhubekeka kweshishini ezithi zibonelele kakuhle ekwakheni ukomelela kwabo kwizothuso zemveli kunye nezivela ngaphandle.
Ukuzinzisa kwezoshishino kunye nezemali kufuna ukuba amashishini asebenze, ahlaziye, aguquke kwaye amkele ukuziphatha kweenguqu kunye nezenzo zemodeli ezinzileyo. Idiphozithi enkulu yokomelela ikwafunyanwa ebantwini-abasebenzi bethu, ngokukodwa abasebenzi abanezakhono nabasempilweni. Ukuza kuthi ga ngoku, njengoko amashishini etyala imali kwiinkqubo zawo nakwiziseko ezingundoqo ngokunjalo kufuneka atyale imali kubantu bawo.
Njengelizwe elikhulayo lesiqithi esincinci, iJamaica iyalixabisa ixabiso eliphezulu lentsebenziswano kunye nentsebenziswano yamazwe ngamazwe ekuqhubeleni phambili iinjongo zophuhliso oluzinzileyo. Kule nkalo, iingxoxo ezifana nezi ziyimfuneko ukuvumela indawo yokutshintshiselana ngezimvo kunye nokuphonononga amathuba okubambisana okuqhubekayo ukuqinisekisa ukuba akukho mntu ushiywe ngasemva, kwinqanaba lasekhaya, lesizwe okanye lamazwe ngamazwe.
Ndijonge phambili kwiziphumo zezi seshini, kwaye ndihlaba ikhwelo kubaququzeleli kunye nabathathi-nxaxheba ukuba badlulele ngaphaya koxwebhu lwesiphumo esiqhelekileyo baye kwiiprojekthi ezisebenzayo kunye nothethathethwano olunika umdla omnye komnye kwaye luxhamle abantu bethu.
Enkosi ngosinaka kwakho.
UMike Morgan uthi:
Novemba 18, 2021 kwi-20: 12
Ngaba ufuna iMali-mboleko yexesha elifutshane ekhawulezayo enenzala ephantsi ngokwentelekiso ephantsi njenge-3%? Sinikezela ngeMali-mboleko yoshishino, iMali-mboleko yobuqu, iMali-mboleko yendlu, iMali-mboleko yemoto, iMali-mboleko yomfundi, iMali-mboleko yokuqinisa amatyala njl.
Imali-mboleko yoBuntu (ikhuselekile kwaye ayikhuselwanga)
Imali-mboleko yeShishini (Ikhuselekile kwaye ayiKhusekanga)
Imali-mboleko yokuhlanganisa kunye nezinye ezininzi.
Qhagamshelana ne-US ngolwazi oluthe kratya malunga nomnikelo weMali-mboleko kwaye siya kusombulula eyakho
ingxaki yezemali. qhagamshelana nathi nge-imeyile: [imeyile ikhuselwe]
Inombolo yefowuni: +917428831341 (Fowuna/What's app)
اسل للتمويل uthi:
Novemba 12, 2021 kwi-06: 03
هل انت بحاجة الى قرض? Inkcazelo ngokuthe gabalala قرض شخصي? هل ائتمانك سيئ؟ نحن جاهزون لنقدم لك القرض والتمويل الذي تحتاجه بفائدة 3٪.
essel finans uthi:
Novemba 11, 2021 kwi-20: 03
Inkcazo yentetho yefowuni 3 … jonga ibala lemidlalo للحصول على قرضك العاجل.
Oktobha 27, 2021 kwi-21: 49